January 18, 2021 Xuseen 8
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) oo u warramayey warbaahinta ayaa soo dhoweeyy hadalka safiirkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya Stephen M. Schwartz oo shaaca ka qaaday in Somaliland ay u qalanto inay dawladdiisu ka furato Qunsilyad.
Wasiirka arrimaha dibaddda ee maamulka Somaliland oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay si aad ah u soo dhoweyneyso hadalka safiirka oo uu tilmaamay inuu yahay mid xaqiiqo ah.
“Hadalka Amb. Stephen M. Schwartz, waanu soo dhawaynaynaa Dawlad ahaan, si fiicana wuu u hadlay, wax jirana wuu sheegay,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibaddda ee xukuumadda Somaliland Yaasiin Faratoon.
Dhanka kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in horumarka ka jira Somaliland ay ku gaareen wax-qabad iyo dadaal badan ay sameeyeen ka maamul ahaan.
Yasin Xiir faratoon waxaa kaliya ee lagaaga baahan waxaa weeye inta iska deysid xoogeyga shilimaadka ah marna lagaa xanibo marna laguu ogaalado inaad adigu madkaxda Allah ku siiyey isticmaadho oo aad Reer las’anod u raadisid mashruuca JBLG oo kale ama guryo ugu dhistid danyarta ama jidka isku xira hargeysa iyo las’anod dhisto hadaadan intaa sameyn karin dee daanyeerkaagaa u ekow “Baashe Mohamed Faarah waa is gartay waana isagii sheegay in loo yaqaano Horgale uusan jecleyna inuu dhiso mafaxtooyo loo dhisayo KII FEERAY ee uu si cad inooku bayaashay qof siyaasada waxka fahmin baa garan karey. Dadka shacabka ah waxaan kula talin nimankaas shilimaadku doorsaday dantiinaa ka muhimsan ee kan hargeysa idinkaga yimaadana soo dhaweeya kan Garowe idinkaga yimaadana soo dhaweeya kii idinka madhruuc wax qabad idiin keena waliba si wanaagsan u soo dhaweeya horu marsada Deegaan kiina dhib u dhaca baahsan idinkaga muuqdo. Sida aan anigu fahmay waxaad u xoogbadan tihiin dadkiina dhexdiisa la’idin lagama faaideystay think about it.
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, INAN GUMEED yaa wax kuu dhisayo inta lagu heysto…..
Jirac,nacnacda meel la fidhiiso inangumeed laaan gaab, sabuuradda xaarka ka daa.
Hadey cidi soo dhaweyn ku badhaadhi laheyd Buuhoodle ayaa Caadaas ku mari laheyd. Kkkk
Laascaanood waxay horumarka baaxadaas Leh ku gaadhay, degenaanshaha ay heshay intey Somaliland tooska ula wareegtey Gobolka Sool oo dhan. Insha Allaah kolka tuurtuurka yar iyo kuwan gabaabsiga sii ah ee wax gaadgaadaa lasoo afjaro waxey ka mid noqon doontaa Magaalooyinka Dhulka Soomaaliyeed oo dhan ugu shidan.
Mudane Faratoon waa wasiirka Wasiirada Somaliland ugu wacan. Waa Somalilander dhab ah. Midhaha isdabo jooga ah ee kasoo go’aya shaqadii uu qabtay ee welina soo socda ayaa taas u daliil ah.
Maxaxweyne Muuse Biixi iyo Wasiir Faratoon si wanaagsan ayay iskula jaanqaadeen. Ina Kaahin kolka lagu darona waxay Somaliland heysataa Libaaxyo aanan, Dibada, Gudaha iyo Hareerahaba laga mari karin. Dawladnimada ayaaba ay asalkeedu tahay iney Hayinka loo dhiibo.
Maansha Allaah. Illaahay cimriga, caafimaadka, caqliga iyo kartidaba ha’u siyaadiyo Masuuuliyiintayada. Aamiin Aamiin Aamiin.
Sxb salaan gobeed iga Hano wanaagna waan kuu rajeynayaa.
Ahmedoow sida aad tidhi Wasiir FARATOON waxa uu ka mid yahay Halbowlayaasha Dowlada Tiirarka adag Somaliland, si wanaagsan oo miyir leh, aqoon leh,waayo aragnimo leh,dulqaad leh ayuu u gutaa hawshiisa.
Xitaa marka la waraysanayo si yar oo gaaban oo xigmadeysan ayuu kusoo koobaa jawaabaha.
Waxan xasuustaa maalin dooda Jimcaha BBCda wasiir faratoon dooda ayuu dhinac kaga jirey kii Jareerka ahaa Dalxa ayaa ku meeraystay Midnimo wasiir faratoon wuxu ku yidhi Midnimo ninkii midnimo haba kuu danbeysee Bal horta Magaaladan aad kasoo dhexhadlayso nabadeeya oo nadiifiya kkkkkkkkkk.
I THANK YOU mr minister Faratoon cimri dheer iyo caafimaad Ilaahay haku siiyo
Aadbaan salaantaas qaaliga ah kaaga gudoomay. Adnan mid taas lamid ah ayaan hawada kuusoo marinayaa. Kkkk Anba waan dhegeystay doodaas. Weriyhii xitaa wuxuu yudhi sida Wasiirka jawaabaha usoo koobkooba. Sharaf iyo cisi ku nooloow sxb.
Ahmed shiine iyo jamaamu hanyaridiina ayaad isugu hambalyeyseen faratoon awoowgiis waxaa lata hayaa ha ku sheekayn muuse xiir bay fardo dhaafeen ilaa 1894 reer horgalo ah ayuu ka firqabey hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho